Inona ireo fomba ahafahana mahazo bakolava maimaimpoana maimaim-poana nefa mahomby?
Mba hahazoana backlinks dofollow dia tena manan-danja amin'ny vanim-potoanan'ny fikarohana fikarohana. Izy ireo dia manompo mba hananganana ny herin'ny loharano ao amin'ny valin'ny fikarohana. Fantatry ny rehetra fa manome tombam-bidy bebe kokoa ho an'ny backlinks dofollow i Google, mandalo amin'ny alalàn'ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala.
Maro ireo mpikirakira vaovao amin'ny tsena nomerika izay mitady fomba tsotra hananganana rohy mankany amin'ny tranonkala. Na dia izany aza, lavitra ireo teknolojia fanorenana rehetra ireo dia manaraka ny toro-làlana Google laharana - мягкая мебель трансформер. Vokatr'izany, ireo mpikarakara tsy misy za-draharaha dia mahazo valiny momba ny fifamoivoizana sy ny fizahantany na mahazo sazy avy amin'ny milina fikarohana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia te hizara aminareo fomba fikarohana mahasoa sy azo itokisana aho mba hahazoana rindran-dofollow dofollow ary hampiakatra ny toeranao amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Antenaina fa hanampy anao hahazo fitaterana bebe kokoa amin'ny fitaovan'ny fikarohana ireo teknolojia fananganana rohy ireo.
Voalohany indrindra, andeha hodinihintsika ny fomba ahafahantsika manavaka ny rakitra dofollow sy nofollow.
Ahoana ny fijerena ny karazana backlinks misy anao?
Zava-dehibe ny mahafantatra ny fahasamihafana misy eo amin'ireo rohy mifandray aminy satria manana ny lanjany hafa ho an'ny fikarohana karazana fikarohana.
Ny rohy Dofollow dia ny rohy izay misy "do" marika eo amin'ny rafitra sy ny famindrana sira fifandraisana avy amin'ny loharano iray ho an'ny hafa. Amin'izany fomba izany, ny rakitra dofollow noforonina avy amin'ny tranokalan'ny avo PR dia mandanja mari-pamantarana manan-danja amin'ny loharano mifandraika, mampiseho an'i Google ho tompon'io loharano io ary ny sandany ho an'ny mpampiasa.
Mba hahitana raha misy backlinks dofollow na tsia, dia mila mametaka azy ianao ary mifidy ny fanaraha-maso ny singa. Ohatra, ny code HTML an'ny rohy dofollow dia toa an'i Google, ary nofolow Google.
Ireo rindran-damina Dofollow dia mahasoa kokoa amin'ny fe-potoana fananganana rohy raha manampy ny tranonkalanao mba hametrahana avo lenta amin'ny valin'ny fikarohana ary hanampy amin'ny fanatsarana ny fahefana an-tananao, pejy fahefana ary PageRank. Ankoatra izany, miteny amin'ny motera fikarohana momba ny kalitao sy ny maha-zava-dehibe ny votoatiny izy ireo.
Commentluv is a popular WordPress plugin that
dia manamboatra ny rohy amin'ny dofollow amin'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Commentluv Enabled Blogs. Azonao atao ny mahita bilaogy toy izany amin'ny fampiasana fehezanteny manokana ao amin'ny Google (ohatra - "bilaogy teknolojia fanentanana," "bilaogy momba ny fahasalamana momba ny fahasalamana", "ny teny fototra tianao ao amin'ny bilaogy" commentluv ", sy ny sisa.
Afaka manangana backlinks dofollow ianao amin'ny alàlan'ny lahatsoratra bilaogy. Voalohany indrindra, mila mifandray amin'ny blaoginao na sehatra fandefasana entana ianao. Aorian'io, mila mifandray amin'ny tompon'ny bilaogy ianao ary manontania azy ny famoahana ny votoatiny amin'ny rohy dofollow. Ampidiro ny lahatsoratra nomenao, ary ao anatin'ny lahatsoratrao, azonao atao ny mampifandray ireo lahatsoratra vaovao anao. Ho hitanao ny fikarohana Google na ny sehatra fitadiavan-tsarinao MyBlogGuest mba hahitanao ny blôgin'ny trano fialamboly.